Kumanaan Qof oo Denmark ah oo Mudaharaad ka sameeyay Xuduuda Sweden ee la xiray Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkKumanaan Qof oo Denmark ah oo Mudaharaad ka sameeyay Xuduuda Sweden ee la xiray
February 25, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Kumanaan deenish ah oo guryo ku leh Sweden ayaa ka mudaaharaaday go’aanka lagu mamnuucayo soo gelitaanka dalka. Waxay muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin in guryahooda ay la kulmaan waxyeelo dhaxan ama jabsi, waxayna dalbadeen in laga dhaafo xayiraada.
Dalka Iswiidan wuxuu soo rogay tan iyo 22-kii bishii Diseembar mamnuucida soo galootiga ka imanaya Danmark si loo xaddido noocyada cusub ee inta badan faafitaanka cudurka corona.
Karen Svensson waxay ku nooshahay magaalada Copenhagen waxayna 20-kii sano ee la soo dhaafay guri ku lahayd Sweden . “Waxaan ka baqayaa in tuubooyinka biyaha ee qabow ay waxyeello soo gaarto,” ayay tiri Karen. Waxaan sidoo kale ka walaacsanahay in gurigeyga la xaday. ”
Qiyaastii 10,000 oo deenish ah oo guryo ku leh Iswidhan ayaa xayiraaddu saamaysay . Victoria Lindtner oo madax ka ah NGO deenish ah ayaa sheegtay inay jiraan dad badan oo deenish ah oo ka xumaaday go, aankan, waxayna intaas ku dartay “Ma aha booqashada moolalka iyo maqaayadaha ku yaal Malmö, laakiin waa inay yimaadaan guryahooda. Halka dadka intiisa kale ee wadamada Midowga Yurub ay u safri karaan Sweden iyagoo wata tijaabada Corona.
Ururku wuxuu ugu yeeray wasiirada iswiidhishka iyo deenishka inay bilaabaan wada hadal si deenishka guryaha ku leh iswiidhan looga dhaafo xayiraada soo galitaanka.
Iswiidhan waxay u ogolaaneysaa dadka deenishka ah ee ka shaqeeya Sweden iyo kuwa taga Bornholm inay dalka soo galaan iyagoo wata tijaabada Corona.
Per Stringberry, Xoghayaha Saxaafada ee Wasiirka Arimaha Gudaha Michael Dampberry, ayaa ugu jawaabey warqad uu u qorey SVT Nyheter Skåne asaga oo leh “hada ma jiraan wax qorshe ah oo looga dhaafayo dadka guryaha Sweden ku leh. Dawladdu waxay u aragtaa mamnuucitaanku inuu yahay tallaabo ku meel-gaadh ah, laakiin xilligan xaadirka ah waxay lagama maarmaan u tahay in laga hortago faafitaanka infekshinka iyo in naf la badbaadiyo. ”
Xayiraadda gelitaanka waxay khuseysaa illaa 31-ka Maarso. Waxaan u xiisay keymaha Sweden iyo gurigeyga, ayey tiri Karen Svensson .